कीर्तिमानी गीतकारको ‘यो मायाको डोरो’ सार्वजनिक (भिडियोसहित) कीर्तिमानी गीतकारको ‘यो मायाको डोरो’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘यो मायाको डोरो’ सार्वजनिक भएको छ । राजन तिमिल्सिनाको सङ्गीत, मेलिना राई र सङ्गीतकार राजनकै स्वर रहेको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
प्रज्ज्वलराज शाक्यको निर्देशन र माधव श्रेष्ठको सह–निर्देशक रहेको गीतको भिडियोमा अञ्जु सुनार र सन्दिप सुवेदीको अभिनय छ । अखिल बास्तोलाको सिनेम्याटोग्राफी र हिम सागर बमको सम्पादन रहेको यस भिडियोलाई निर्देशकले रोमाण्टिक तथा मनोरञ्जक बनाउने भरपुर प्रयास गरेका छन् ।
फरक शैलीका गीत मार्फत डा. उपाध्यायले ३२ विश्व रेकर्ड राख्न सफल भएका छन् । गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड सहित डा. उपाध्यायले गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा विभिन्न ३२ विश्व रकेर्ड कायम गरेका छन् ।
पार्क क्याफेमा भ्यालेन्टाईन साङ्गितिक साझ